परदेशबाट फर्किए, घरमै क्वारेन्टाइनमा बसे, श्रीमतीले भेट्न मानिनन्, दुःखी जयले आत्महत्या गरे – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/परदेशबाट फर्किए, घरमै क्वारेन्टाइनमा बसे, श्रीमतीले भेट्न मानिनन्, दुःखी जयले आत्महत्या गरे
परदेशबाट फर्किए, घरमै क्वारेन्टाइनमा बसे, श्रीमतीले भेट्न मानिनन्, दुःखी जयले आत्महत्या गरे
काठमाडौं। होम क्वारेन्टाइनमा बसेका श्रीमानसँग श्रीमतीले भेट्न नमानेपछि ती युवकले आत्महत्या गरेका छन् । उत्तर प्रदेशको जौनपुरमा कोरोनाको डरका कारण ती युवतीको जीवन उजाडिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका युवकले श्रीमतीलाई भेट्न चाहेका थिए तर श्रमितीले भेट्न नमानेपछि दुःखी युवकले आत्महत्या गरेका हुन् ।
आज तकका अनुसार जयकुमार मौर्य नामका युवक ४ दिन पहिले मुम्बइबाट फर्किएका थिए । उनलाई घरकै एक कोठामा होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । कोरोनाबाट संक्रमित हुने डरले उनकी श्रमितीले उनलाई झ्यालबाट त हेर्थिन् तर उनको नजिक जान मान्दिनथिन् । १५ मेका दिन जयले श्रीमतीलाई कोठामा बोलाएका थिए तर उनकी श्रीमतीले मानिनन् ।
जयले श्रीमतीलाई पटक पटक कोठामा आउन आग्रह गरे तर कोरोनाको डरले श्रीमती कोठामा गइनन् । श्रीमतीले पटक पटक अस्वीकार गरेपछि ती दुईबीच झगडा भयो । झगडाबाट आहत भएपछि जय कुमारले घर नजिकैको एक रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे । बिहान उनको शव बरामद भएपछि पुलिसले यसको थप जाँच गरिरहेको छ ।
अस्ताएको बुध उदायो: हरेक राशिलाई असर ! कुन राशिलाई कस्तो ? हेर्नुहोस् !